LEGO 10294 Titanic set အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအပိုင်းအရေအတွက်
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 430 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, 10293 Santa's ခရီးစဉ်, ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, art, Creator Expert, Instagram ကို, Lego, LEGO art, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ကောလာဟလများ, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group
ကောလဟာလ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများကပိုမိုစီမံနိုင်သောအပိုင်းအရေအတွက်ကိုညွှန်ပြသောကြောင့်အချိန်အားလုံးတွင်အကြီးဆုံးအဖွဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
နောက်ကျ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေထွက်လာတယ် လူကြီးများအတွက် Lego (ယခင် Creator Expert) မော်ဒယ်သည်အပိုင်း ၁၂၀၀၀ ပါ ၀ င်ပြီးမျက်မှောက်ခေတ်၌ ၁၁၆၉၅ ရှိလက်ရှိမှတ်တမ်းကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ.
ဒါပေမယ့် Instagram အသုံးပြုသူပါ exabrickslegogo_ အခုအဲဒါကိုတောင်းဆိုတယ် ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် အပိုင်း ၉,၀၉၀ သာပါ ၀ င်လိမ့်မည်art ၁၂၀၀၀ ကနေပြန်မဆင်းရင်ပိုအထင်ကြီးပုံရလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းသည်အကြီးမားဆုံးမဟုတ်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။Lego Art အုတ်တံတိုင်း ၅၄ ခုဖြင့်အစုစုကိုအတိတ်၌တင်ခဲ့သည် ၁၀၂၇၆ Colosseum.
စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၆၂၉.၉၉ တွင်ရှိနေလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်မနှစ်ကရောမ၏အထင်ကရပုံတူထက်ဒေါ်လာ ၈၀ ပိုများသည်။ ၎င်းမြင့်တက်မှုသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အလေးချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်ပြီးကြီးမားသောအပျော်စီးသင်္ဘောကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်လိုအပ်သောပိုကြီးသောအပိုင်းများနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။
၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် ဒီလရဲ့အစောပိုင်းမှာ VIP အစောပိုင်းသုံးခွင့်ရမယ့်အရိပ်အယောင်မပြရသေးပေမယ့်နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု (စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ကြာသပတေးနေ့ မှစ၍ အဖွဲ့ဝင်များထံရရှိနိုင်ပါသည် Lego အဖွဲ့၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်) ။
အတက်အကျ p ကိုပေးတာart ပတ်လည်ကိုရေတွက် ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ်သို့သော်ယခုသတင်းကိုဆားတစ်စေ့နှင့်ယူရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
← LEGO The Muppets Collectible Minifigures သည် ၂၀၂၂ အတွက်ကောလဟာလဖြစ်သည်
LEGO ကိုအနိုင်ရဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး Creator Expert 77942 Fiat 500 နှင့်အတူ Brick Fanatics →